ဗားမောင့်ပံ့ပိုးသူများအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက် - 802Quits
ပင်မစာမျက်နှာ » ပေးသူ
သင်၏လူနာများထွက်ရန် ပို၍ အရေးကြီးသောအချိန်မရှိခဲ့ပါ။
လူနာ၏ခရီးထွက်နေစဉ်သင်၏အားပေးမှု၊ စာနာမှုနှင့်အကြံဥာဏ်များသည်အရေးကြီးသည်။ ထိုစကားများဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
တိုင်းအလည်အပတ်ခရီးမှာမေးပါ. သင့်လူနာသည်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါကအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ဖူးပါကသူတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်စဉ်းစားရန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ဒါတွေကိုသုံးပါ Talking Points (PDF) ဗားမောင့်ပံ့ပိုးသူများကတီထွင်ခဲ့သည်။
802Quits ကိုကိုးကားပါ. မတူညီသောဗားမောင့်လူကြီးများနှင့်လူငယ်များအားရပ်တန့်ခြင်းအစီအစဉ်များသည်သင်၏လူနာများကို၎င်းတို့အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ အရင်းအမြစ်များသည်အခမဲ့၊ ပြည့်စုံပြီးအွန်လိုင်း၊ လူကိုယ်တိုင်၊ ဖုန်းဖြင့်၊ စာသားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခမဲ့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ သွားဖုံးနှင့်အဆစ်များအပါအဝင်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံး (NRT) ကိုရယူနိုင်သည်။ NRT သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နီကိုတင်းကိုအသင့်အတင့်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာစွဲလမ်းနေပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသောအသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်များအတွက်ဆေးညွန်းစာမပါဘဲအကြံပြုထားပါသည်။
စိတ်ကြိုက်အရင်းအမြစ်များကိုအထူးလူ ဦး ရေအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် Medicaid အဖွဲ့ဝင်များ, LGBTQ, အမေရိကန်အင်ဒီးယန်း နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် Vermonters.
လူနာပစ္စည်းများ၊ လမ်းညွှန်များ၊ တင်ပြချက်များနှင့်ဆေးရွက်ကြီးဖြတ်ခြင်းအကြံပေးခြင်းအတွက်လူနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုံစံများ၊ ၈၂၂ ကွင်းဆက်များ၊ ဗားမောင့်ရပ်နားခြင်းအစီအစဉ်များ၊ ဆေးဖြတ်ရန်နှင့်လူငယ်များအတွက် vaping များအပါအ ၀ င်၊
အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုမှုကုသမှုအတွက်အမေရိကန်နုိုင်ငံ Thoracic Society ၏လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုလမ်းညွှန်။
၂၀၂၀ လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုလမ်းညွှန်တွင်ဆေးလိပ်မှီခိုမှုဆေးဝါးကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်မှုအပြောင်းအလဲများဖြင့်အကြံပြုချက်အသစ်ခုနစ်ခုပါရှိသည်။ အကြံပြုချက်နှစ်ခုပါဝင်သည်:
ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ကုသမှုစတင်နေပြီဖြစ်သောနီကိုတင်း patch ကို အသုံးပြု၍ varenicline ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုနေသည့်အရွယ်ရောက်သူများတွင်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါကလူနာများသည်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီစောင့်ဆိုင်းမည့်အစား varenicline ဖြင့်ကုသမှုခံယူရန်ဆရာဝန်များကအကြံပြုသည်။
လမ်းညွှန်အသစ်ကိုဖတ်ပါ အမေရိကန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝေဖန်စောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဂျာနယ်တွင်အကြံပြုချက် (၇) ချက်ပါရှိသည်။
၂ မိနစ်ဗီဒီယိုကြည့်ပါ လမ်းညွှန်အသစ်ကိုအနှစ်ချုပ်။
သင့်လူနာများဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကူညီရန်ယခု ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင် Vermonters အများစုသည် Medicaid နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်များအားရပ်တန့်ခြင်းအတွက် 802Quits အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောပြည့်စုံသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိမပြုမိကြပါ။